अन्तिम दिनको प्रचारमा शीर्ष नेताको दौडधुप : आज को को नेता कता ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
अन्तिम दिनको प्रचारमा शीर्ष नेताको दौडधुप : आज को को नेता कता ?
तीन जिल्लामा देउवाको व्यस्तता
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार मध्याह्न ११ बजे चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेल रहेको उक्त सभामा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सहभागी हुनेछन् । बिहीबारै देउवाले लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका तथा काठमाडौंको असन र बूढानीलकण्ठमा हुने सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । तीन जिल्लाको चुनाव प्रचारमा भाग लिन देउवाले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दै छन् ।
आचारसंहिता अक्षरशः पालना गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता
मतगणना तत्काल हुन्छ : आयोग
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाअनुसार पहिलो चरणको मतदान सकिएलगत्तै मतगणना हुने बताएका छन् । आयोगले बुधबार दलहरूसँग गरेको छलफलमा नयाँ शक्ति पार्टी, संघीय समाजवादी फोरमलगायतले दुवै चरणको निर्वाचन सकिएपछि मात्रै मतगणना गर्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । तर, यादवले भने, ‘कानुन बनाउने तपाईंहरू नै हो, अनि हामीले त्यहीअनुसार काम गर्दा प्रश्न उठाउनु भएन ।’ आजको नयाँ पत्रिकाबाट